Muxuu ka yiri Frenkie de Jong mustaqbalka Lionel Messi?? – Gool FM
Dajiye September 1, 2020
(Spain) 01 Seb 2020. Xiddiga qadka dhex kooxda Barcelona ee Frenkie de Jong ayaa sheegay in Lionel Messi uu wali la xariiro saaxiibadiis Barca, inkastoo uu doonayo inuu baxo xagaagan.
Lionel Messi ayaa ku wargaliyay maamulka Barcelona rabitaankiisa ah inuu baxo, laakiin Josep Maria Bartomeu wuxuu doonayaa inuu xaalada adkeeyo, wuxuuna ku adkeysanayaa in la bixiyo qiimaha lagu burburin karo qandaraaskiisa, haddii uu doonayo inuu ka tago naadiga reer Catalonia ka hor bilowga xilli ciyaareedka cusub.
Haddaba laacibka reer Holland ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Messi waxaan wali ku wada hadalnaa WhatsApp-ka gaarka ah ee kooxda Barcelona, waxaan rajeynayaa inuu nala sii joogi doono, laakiin waxaas aniga iguma xirna, aniga ma ahan qofka ay tahay inuu la hadlo isaga, xaqiidii xilliyadii dhawaa ee la soo dhaafay waxaa jiray shaqsiyaad badan oo isaga si aad ah ugu dhawaa”.
“Hadii uu runtii Messi baxo, waxay dhabar jab weyn ku noqon doontaa kooxda, laakiin marka aan ka soo laabto kaddib kulamada caalamiga ah, waxaan arki doonaa waxa ka dhacay kooxda, balse hada waxaan diirada saarayaa xulkeyga qaranka”.
Intaas kaddib Frenkie de Jong wuxuu ka hadlay imaatinka Ronald Koeman ee kooxda Barcelona, wuxuuna yiri:
“Waan ku faraxsanahay taas, laakiin waxaan ugu xiisi doonaa xulka qaranka Holland, kaliya waqti yar ayaan kula hadlay taleefanka, laakiin markaan tago Barcelona, ​​waxaa laga yaabaa inaan kala hadlo waxyaabo kale sida booskeyga”.
“Xilli ciyaareedkeygii ugu horreeyay ee Spain wuxuu ahaa mid niyad jab leh, waxaan luminay fursadii aan ugu guuleysan laheyn horyaalka, waxaa sidoo kale la ceyriyay labo macalin, laakiin markaan fasax ku jiro kama fikiro arrimahaas”.
“Messi mar hore ayuu ka tagay Barcelona” – halyeey kooxda Real Madrid ah
Maxaa ka cusub heshiiska ay Chelsea ku dooneysay Kai Havertz??